एम्बुलेन्स चालक जान नमानेपछि को’रोना संक्रमितलाई आफ्नै गाडीमा लगे स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखले ! – Khabarhouse
एम्बुलेन्स चालक जान नमानेपछि को’रोना संक्रमितलाई आफ्नै गाडीमा लगे स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखले !
Khabar house | २१ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०३:१५ | Comments
बागलुङ : गत ४ चैतमा बेल्जियबाट आएकी बागलुङकी ६५ वर्षीया वृद्धामा को;रोना संक्रमण देखिए पछि बिहीबार बेलुका अस्पताल भर्ना गरिएको छ । को;रोनाको लक्षण नदेखिएको भन्दै उनी घरमै बस्दै आएकी थिइन् । संक्रमण भएको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि उनलाई विहीबार राति धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।
तर, अस्पताल लैजान त्यति सहज भने भएन । उनलाई लिन नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बागलुङका एम्बुलेन्स चालक जान नमानेपछि स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुरज गुरौले आफ्नै चालक रुद्र पराजुलीलाई लिएर विरामी लिन पुगेका थिए। मेयरदेखि सिडिओ समेत पन्छिएपछि स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख गुरौ अग्रसर भए । पिपिई लगाएर उनले वृद्धालाई आफ्नै गाडीमा राखेर अस्पताल पुऱ्याएका हुन् ।
ती वृद्धा छोरी भेट्न बेल्जियम गएकी थिइन। कतार एयरको क्युआर– ६५२ विमानबाट उनी ४ चैतमै फर्किएकी थिइन। सोही दिन उनी यति एयरलाइन्स मार्फत पोखरा गएकोमा त्यहाँबाट स्कार्पियोमा बाग्लुङ गएकी थिइन् । बाग्लुङकै अर्की को;रोना संक्रमित युवती र उनी सँगै फर्किएका थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।